Nhau - Mugadziri
KingTai Kambani yakazara yekutengesa mugadziri inosanganisa kugadzirwa uye sales.We tine yedu fekitori uye mhiri kwemakungwa timu yekutengesa, fekitori yedu iri muHui Zhou Guta Guangdong Province.Our avhareji ekugona kugona inopfuura 300,000 pcs pamwedzi.
Kambani yedu ine makore anopfuura makumi maviri ane ruzivo musimbi yekuveza.
Senge: bheji, opener, menduru, keychain, chirangaridzo, cufflinks, lapel pini, bookmark, nezvimwewo Uye isu tinoshanda nevakawanda vanozivikanwa mhando, senge: Harry muumbi, Disney, Wal-mart, Universal Studios nezvimwe.
Kubva payakatanga, Iyo setifiketi uye patent yatakatora inodarika zvidimbu makumi matatu, akati wandei ayo ari SOS, Sedex uye ISO9001.
Isu tinogara tichiteedzera kune yakakwirira kugadzirwa, yemhando yepamusoro zviyero zvekuda ivo pachavo Mushure mekupedza kweumwe neumwe maitiro, isu tine yakasarudzika QC timu yekutarisa kana izvo zvigadzirwa zvinoenderana neinotevera maitiro, kuitira kuve nechokwadi cheanokodzera mwero wezvigadzirwa.
Iyo kambani ine yakakwana yekugadzira kugona uye yekuchengetedza capacity.Usual, kana timu yedu yeQC iri kuongorora zvigadzirwa, ivo vachatora izvo zvisina kukodzera zvigadzirwa uye voregedze avo vanokwanisa zvigadzirwa vapinde mune inotevera maitiro. Ipapo izvo zvisina kukodzera zvigadzirwa zvichadzoserwa kune yapfuura maitiro ekuti refinishing Panguva imwecheteyo, isu tine chiyero chekudzora pasiti chiyero chezvigadzirwa panguva yekuongorora.Izvi zvakagadzwa zvinoenderana nezvakasiyana zvigadzirwa. Semuenzaniso, yedu bheji yekukosha mwero ndeye 95%. Kana chigadzirwa chisina kukodzera chave pamusoro pane ichi chiyero, tinogadzirisazve chisina kukwana chigadzirwa.Tinokumbira utizivise kana yako inotarisirwa yekupasa chiyero iri 98%, kuti tikwanise kupa chiyero chekupfuura kwechigadzirwa panguva yekuongorora.Tine nzvimbo yakakwana yekuchengetedza uye nharaunda yekutsigira hombe maodha Tinokumbira utizivise kana iwe uchida chikamu chekutumirwa. Imba yedu yekuchengetera ichatarisira kuchengetedza kwezvinhu.
Nhasi ndiMambo Tai ari kushanda nemutengi chinangwa chekutanga chebasa uye atora chikamu mumusangano wecanton wakanaka uye hong kong. Kwemakore mazhinji. Isu tinopa sechokwadi sevatengi uye nekuchengetedza iyo yekuvandudza ine kumeso kweakafadza hupenyu zvisikwa.